Zụta uzo Adrenosterone (382-45-6) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ihe nkuzi / Adrenosterone ntụ ntụ
SKU: 382-45-6. Category: Ihe nkuzi
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Adrenosterone ntụ (382-45-6), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
Adrenosterone ntụ ntụ, nke a makwaara dị ka ihe onwunwe Reichstein, yana 11-keto (11-KA4), 11-oxoandrostenedione (11-OXO), na androst-4-ene-3,11,17-trione, bụ horroone steroid na mmetụta na-adịghị ike androgenic , na etiti / prohormone nke 11-ketotetosterone.
Adrenosterone ntụ ntụ isi agwa
aha: Adrenosterone ntụ ntụ
Molekụla Formula: C19H24O3
Ọbara arọ: 300.39
COMMON BRAND (S): Adrenosterone ntụ ntụ
Aha (S): 11-OXO, Adrenosterone ntụ ntụ, ihe onwunwe Reichstein G, 11-keto etrostenedione (11-KA4), 11-oxo androstenedione (11-OXO), androst-4-ene-3, 11, 17-trione
Adrenosterone ntụ ntụ Usage
Onye ọ bụla nke na-etinye aka n'ime ụwa nke ahụ na-eme ka ọ bụrụ nke ọma na adrenosterone powders na otú ọ bara uru mgbe a na-eji ya eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ejirila 2 dị iche iche Adrenosterone ngwongwo ngwongwo ka a na-ahọrọ maka onyinye na ụwa nke na-arụ ọrụ ma ọ bụ ihe ọjọọ PCT mere. Patrick Arnold mere ọtụtụ ihe iji nweta mgbasa ozi Adrenosterone n'ahịa ma bụ ọkachamara na-egosi na ụwa dị irè na-eji pro-hormones eme ihe n'enweghị mmetụta ọ bụla. Ọ bụ otu n'ime ngwaahịa ndị a kasị mara amara nke na-eme ka ihe dị iche n'ịbelata abụba n'oge usoro mmegbu.
Kedu ihe nyocha nke Adrenosterone ntụ ntụ
E nwere 3 dịgasị iche iche usoro nke onye ọrụ Adrenosterone powde (CAS 382-45-6) nwere ike ịbanye. Enwere ọdịiche dị iche na nsonaazụ dị elu karịa usoro ahụ, ma a ghaghị iji ihe ndị dị elu karịa obere oge. Ị nwere ike iwepụta ngwaahịa kachasị elu maka mgbatị kachasị elu, ma ịkwesịrị ịme nkwadebe tupu oge na mgbe ị zere mmetụta ndị ọzọ.
300mg maka oge elekere 9
600mg maka oge elekere 7
900mg maka oge elekere 5
N'iji obere ogwu 300mg dị n'ozuzu ọ dị ntakịrị ntakịrị na achọpụtara uru ahụ, ma ọ nwere mmetụta dị na mwube ahụ karịa abụba. Nhazi usoro nke 600mg na-egosi na ọ ga - egosi nsonaazụ kacha mma na ngụkọta ngwongwo ngwongwo nke ma ọ dịkarịa ala 5 pound. Ngosipụta nke 900mg dị elu nwere ike igosi mmụba nke ngwongwo muscle 10 pound ma ọ bụ karịa. Ọ dị nnọọ ka nsonaazụ ndị a hụrụ na ogige siri ike, mana ntakịrị na-emetụta ya.
I kwesiri ịmalite ime mgbanwe ndị dị mkpa maka nri 2 tupu ịmalite usoro ịhọrọ gị. Ọ na-enye aka iji nchịkọta nke multivitamins na mmanụ azụ. I kwesiri igbalite ihe oriri protein ka ị mezue okirikiri. Ebe ọ bụ na homonụ gị ga-agbanwe mgbe ị kwụsịrị iji Adrenosterone na-eme ka ọ dị mkpa iji nweta ngwaahịa ọgwụgwọ dị mma maka 4 gaa na 6 izu mgbe okirikiri. O nwere ike ọ gaghị adị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eme mgbatị 9 n'izu ogologo nke 300mg, ma ihe ndị dị elu chọrọ iji ezigbo ngwaahịa PCT. Nsonaazụ kachasị mma na-eme mgbe ị kwadebere ma gosipụta ndidi n'inweta ahụ gị na mgbanwe.
Esi Adrenosterone na-arụ ọrụ
Mgbe ewerere dịka enyere gị ntụziaka ma na-arụ ọrụ ị họọrọ n'ụzọ dị irè, ị ga-ahụ ka ahụ gị na-arịwanye elu cortisol ma nwee mmụba na testosterone. Ọ ga-ejidekwa estrogen na ọkwa ndị na-eme ka ikike ịkwalite akwara na ibelata abụba dị elu. Ihe kachasị ndị ọkachamara mara mma bụ na ọ bụghị nanị na ọ na-eme ka anụ ahụ dị nro dị mfe na ngwa ngwa, ma ọ na-enye nkọwa dị mma karịa ihe ị mepụtara. Ọ na-enye ụzọ:
Jikwaa mmetụta cortisol;
Weghachi ọrụ nke HPTA;
Uru nke Adrenosterone ntụ ntụ
Enwere otutu uru site n'inye Adrenosterone ntụ ntụ n'elu ngwaahịa ndị ọzọ, ma nke kachasị mkpa bụ na mmepụta nke na-abụghị nke methylated anaghị esi ike imeju imeju gị. Ịkwesighi ibu ngwaahịa gị iji chebe ihe dị mkpa a. Ọ na-ewepụ nchegbu ma na-azọpụta ego na ngwaahịa ndị ọzọ. Ịchọ ịbawanye ahụ ike agaghị adị na ụfụ nke ahụike gị na Adrenosterone ntụ ntụ na-enyere aka abụọ ahụ.
Mmetụta Dị Mkpa
Adrenosterone ntụ ntụ na-eme ka ọ dị mma n'ihi ụda ma belata mmetụta nke mmetụta ndị nwere ike. O nwere ike isi na isi isi ọwụwa nwayọọ nwayọọ kwụsị, ma ọ bụrụ na ị na-eme nkwadebe kwesịrị ekwesị na mgbe usoro mmemme ị ga-enweghi ike ịnweta ya. Ị nwere ike ịnwe obere mgbu azụ mgbe ị na-arụ ọrụ, ntakịrị mmụba na ọbara mgbali na nsogbu ịrahụ ụra ma ọ bụrụ na ị na-etinye oge dị ogologo n'ụbọchị. Ịgbanwe oge ị na-ewepụta ngwaahịa ahụ yiri iji dozie nsogbu ihi ụra.
Uru ọzọ nke na-eme ka Adrenosterone fụchaa ntụcha bụ na ị nwere ike iji ya na-emepụta abụba ma jiri ngwaahịa ndị ọzọ mee ka ọnụ ọgụgụ nrịbawanye nke ahụ dịkwuo elu. Ọ na-ahụkarị ịhụ ngwaahịa a iji na ihe karịrị otu ọzọ. Nke a na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ zuru oke maka ọkwa niile nke ahụike na ahụmume nke achọrọ. Ọ bụ otu pro-homonụ kachasị mfe na ahịa.
Adrenosterone ntụ ntụ Marketing
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwaahịa nke nwere ike inyere aka ịkpụzi ahụ ike dị mma ma wepụ abụba n'oge usoro ahụ ị nwere ike ịchọrọ iji pro-hormone tụlee. Adrenosterone ntụ ntụ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ahịa ruo n'oge. Ọ dị oke irè ma nwee mmetụta dị oke oke.
Adrenosterone ntụ ntụ bụ pro-hormone nke na-abụghị nke methylated nke a na-eji edozi ma ọ bụ bodybuilders jiri belata abụba, na-eme ka ahụ ike na nkwonkwo muscle. A na-ewere ya dị ka otu n'ime pro-homonụ kachasị nwayọọ ma na-enye obere mmetụta karịa ọtụtụ. Ọ na-adịchaghị mma na imeju n'oge a na-eji ya eme ihe, a pụkwara ịchọta ya, ma ọ bụ jiri ya na ogige ndị ọzọ dị mfe. Ọ na-adịkarị na ọgwụ ma ọ bụ ntụ ntụ. Ọ bụ otu n'ime pro-homonụ dị oke ọnụ, ma ọnụego dị ala nke mmetụta mmetụta na mgbanwe nke iji mee ka ọ bụrụ otu n'ime ngwaahịa ndị ọzọ na-ewu ewu n'ebe ahụ na-eji ya eme ihe.
Esi zụta Adrenosterone ntụ ntụ si AASraw
Adrenosterone ntụ ntụ Ezi ntụziaka